Al Shabaab oo Weeraro Safballaaran Ah Ku Qaaday Saldhigyada Ciidanka Itoobiya Ee Deegaanka Halgan.
Wednesday May 17, 2017 - 10:22:51 in Wararka by Super Admin
Wararka ka imaanaya gobolka Hiiraan ayaa sheegaya in dagaallo culus ay ka dhaceen mid kamida deegaanada ay xoogga ku joogaan ciidamada gumeysiga Itoobiya.
Ciidamo aad u hubeysan oo katirsan Xarakada Shabaabul Mujaahidiin ayaa xalay fiidkii weeraro culus ku qaaday saldhigyada ciidamada Itoobiya ay ku leeyihiin deegaanka Halgan ee bartamaha dalka Soomaaliya.
Dagaalka oo ahaa mid saacado badan qaatay ayaa khasaara lixaad leh lagu gaarsiiyay ciidamada Itoobiya, wariye Nuur Cali Warsame oo Hiiraan ku sugan ayaa soo sheegay in ciidamada Al Shabaab ay dhowr jiho ka galeen deegaanka Halgan waxayna halkaasi kula dagaallameen ciidamada Itoobiya.
Dadka deegaanka ayaa sheegay in ay maqlayeen jugta madaafiicda iyo daryanka rasaas lays dhaafsanayay.
Wararka qaar ayaa sheegaya in qeybo badan oo katirsan deegaanka Halgan ay muddo saacada ah heysteen ciidamada Mujaahidiinta halka Xabashida Itoobiya ay ka dagaallamayeen difaacyo ay ku leeyihiin dacalka xiga dhanka wadada laamiga ah ee ka timaada magaalada Beled Weyne.